श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छन यी ४ राशीका श्रीमती, हरेक पलमा दिन्छन् साथ – Krazy NepaL
काठमाडौँ । कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ। तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ।
कोहि महिला आफ्नो श्रीमानको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि महिला आफ्नो श्रीमानलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन्।
यो राशी भएका महिलाहरु जिद्दी हुन्छन्। साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खुबी यिनीहरुमा हुन्छ। घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्रभाव जमाउने खालका हुन्छन्। श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै कठिनाई हुँदैन। कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा राजनै गर्छन्।
यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन। कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन्। यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने खुबी हुन्छ।
Prevमरिसकेका मानिस किन आउँछन् सपनीमा ? यी हुन सक्छन कारण :
पानी कम पिउनुहुन्छ ? यसभित्र यस्ता १० काम गर्नेलाई हुन्छ मृगौला बिग्रिने खतरा!
आज असाेज २२ गते शुक्रवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल